Free Thinker: CPF အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၁)
စင်ကာပူ၌ နေထိုင်လုပ်ကိုင်သူများအဖို့ သိသင့်သိထိုက်သော အကြောင်းတစ်ခုမှာ CPF ဖြစ်၏။ အချို့အကြောင်းအရာများမှာ ကျွန်တော်တို့ သိသလိုလိုနှင့် မသိသေးသော အသေးစိတ် အချက်အလက်ကလေးများ များစွာရှိ၏။ သည်တော့ ကျွန်တော်က မိတ်ဆွေများ CPF အကြောင်း ဂဃနဏ သိရအောင် အသေးစိတ် ရေးပါမည်။ သို့အတွက် တော်တော်လေးရှည်ပါမည်။ အားလုံးဖတ်ရမှာ ပျင်းလျှင် မိမိသိလိုသည်ကိုသာ ရွေးဖတ်ပါလေ။
ဤတွင်ရေးသားထားသမျှ အချက်အလက်အားလုံးမှာ စင်ကာပူအစိုးရ website ဖြစ်သော http://cpf.gov.sg/ နှင့် Wikipedia website, http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Provident_Fund မှ ဖြစ်ပါသည်။
၁။ CPF ဆိုတာ ဘာလဲ
Central Provident Fund (CPF) ဟူသည် အလုပ်လုပ်နေသော စင်ကာပူနိုင်ငံသားများ နှင့် စင်ကာပူ PR (Permanent Resident) များအား အလုပ်မှ အနားယူမှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ အိမ်ဝယ်ယူမှု စသည်တို့အတွက် မစုမနေရ စုရန် အစိုးရမှချမှတ်ထားသော အစီအမံတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို CPF ကို Ministry of Manpower (MOM) အောက်ရှိ CPF Board အဖွဲ့မှ စီမံခန့်ခွဲပါသည်။
CPF ကို ၁၉၅၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့က စတင်ခဲ့သည်။
CPF ရုံးချုပ်မှာ 79 Robinson Road, #02-00, Singapore 068897 ဖြစ်ပါသည်။
၂။ CPF သမိုင်း
စင်ကာပူကျွန်းကို ဂျပန်သိမ်းအပြီး ၁၀ နှစ်အကြာ၊ အငြိမ်းစားများသည် အိုမင်းမစွမ်းအချိန်တွင် ငွေရေးကြေးရေး အကြပ်အတည်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသဖြင့် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ပြန်သိမ်းသောအခါ ထိုအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် စင်ကာပူ၌ CPF စနစ်ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ စင်ကာပူ၏ တိုးတက်မှုများနှင့်အတူ လူနေမှုစနစ် မြင့်မားလာခဲ့ပြီး ပျမ်းမျှသက်တမ်းလည်း တိုးလာခဲ့သည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှစကာ CPF စုငွေကို အသက် ၅၅ နှစ်ထိ မိမိတို့ လုပ်စာလခထဲမှ ထည့်ဝင်ကြရသည်။
CPF တံဆိပ်မှာ သော့သုံးချောင်းဖြစ်၏။ စက်ဝိုင်းက ပြီးပြည့်စုံခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဒိုင်းပုံစံမှာ မိမိတို့ အငြိမ်းစားယူချိန်တွင် ငွေကြေးကိစ္စအားလုံးကို ကာကွယ်ပေးထားခြင်း ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်၏။ သော့သုံးချောင်း ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာကား အလုပ်သမား၊ အလုပ်ရှင် နှင့် အစိုးရတို့ ညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်၏။ အစိမ်းရောင်မှာ CPF ၏ အမြဲတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော သဘောကို ဆောင်၏။
၃။ CPF Accounts (CPF ငွေစာရင်းများ)
အလုပ်သမား နှင့် အလုပ်ရှင်တို့သည် အလုပ်သမား၏ ၀င်ငွေ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို CPF စုငွေအဖြစ် လစဉ် ထည့်ဝင်ကြရ သည်။ ဤငွေများကို CPF ငွေစာရင်းသုံးခုသို့ ခွဲဝေထည့်သွင်း စုဆောင်း၏။ ထိုငွေစာရင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏။
၁) Ordinary Account
ထိုငွေစာရင်းမှ ငွေများကို အိမ်ဝယ်ခြင်း၊ အာမခံအတွက်ပေးခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း နှင့် ပညာရေး တို့အတွက် သုံးနိုင်သည်။
၂) Special Account
ဤငွေစာရင်း စုငွေများကို အငြိမ်းစားယူပြီးနောက် လုပ်ကိုင်မည့် ငွေကြေးလုပ်ငန်းများအတွက် သုံးနိုင်သည်။
၃) Medisave Account
အတည်ပြုထားသော ကျန်းမာရေးအာမခံများ နှင့် ဆေးရုံတက်ကုသခြင်းများအတွက် ဤစုငွေထဲမှ သုံးနိုင်သည်။
၄။ စုဆောင်းငွေ အချိုး
CPF စုငွေကို ၀န်ထမ်းက မည်မျှ၊ အလုပ်ရှင်က မည်မျှထည့်ရမည် ဆိုသည်မှာ အတော်လေး ရှုပ်ထွေးပါသည်။ အကြမ်းဖျဉ်း အားဖြင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ စကာ Medisave စုငွေကို ၅ ရာခိုင်နှုံးတိုးမြှင့်လိုက်သည်။ ၂၀၁၁ မတ်လတွင် အလုပ် ရှင်၏ ထည့်ဝင်ငွေကို နောက်ထပ် ၅ ရာခိုင်နှုံးတိုးလိုက်ပါသည်။ ထိုတိုးလိုက်သော ပိုက်ဆံသည် Special Account အတွင်း ရောက်သွားမည်။ ထိုအခါ အလုပ်ရှင်က ထည့်ဝင်ရသည့် စုစုပေါင်းရာနှုံးမှာ ၁၅.၅ % ဖြစ်သွားပြီး အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ရပ်ပေါင်း ထည့်ဝင်ငွေမှာ ၃၅.၅% ထိ တိုးသွားသည်။ ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာလတွင် အလုပ်ရှင်ထည့်ဝင်ငွေကို နောက်ထပ် ၅ % တိုးမြှင့်လိုက်သဖြင့် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ရပ်ပေါင်း ထည့်ဝင်ငွေမှာ ၃၆% ထိ ရောက်လာပါသည်။
ဤတွက်ချက်မှုများကို နောက်ပိုင်းတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြပါမည်။
၅။ CPF စုဆောင်းငွေများကို မည်ကဲ့သို့ သုံးနိုင်သနည်း။
ယခု ယေဘူယျသဘောပြောပါမည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အသေးစိတ် ထပ်မံရှင်းပြပါမည်။
အနည်းဆုံးစုဆောင်းထားရှိရမည့် စုစုပေါင်း ငွေပမာဏ ပြည့်ပြီးနောက် အသက် ၅၅ နှစ်ပြည့်လျှင် မိမိ CPF စုငွေများကို ပြန်ထုတ်ရနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း တစ်စုံတစ်ယောက်သည် တစ်သက်တာမသန်မစွမ်း ဖြစ်သွားလျှင် သို့မဟုတ် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ အပြီးအပိုင်ထွက်ခွာသွားလျှင်လည်း မိမိတို့ CPF စုငွေများကို ပြန်ထုတ်နိုင်ပါသည်။
CPF စုငွေများကို အသက်အာမခံဝယ်ရန် သုံးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် CPF ရှိ အငြိမ်းစားငွေစာရင်း (Retirement Account) တွင် လည်း သိမ်းထားနိုင်သည်။ အသက်အာမခံငွေကို အသက် ၆၂ နှစ်ပြည့်သည်နှင့် CPF စုငွေထဲမှ အလိုလိုပေးသွားပါလိမ့်မည်။
ထို့ပြင် CPF စုငွေများကို အသက် ၆၂ နှစ်မှစကာ လစဉ်အသုံးစရိတ်များအတွက် ငွေထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်။ စ၍ထုတ်မည့်အချိန် နောက်ကျလေ ငွေထုတ်ချိန် ပိုကြာလေဖြစ်ပါမည်။ ဥပမာ - အသက် ၆၂ နှစ်တွင် စထုတ်ပါက စုငွေကို အသက် ၈၂ ထိသာ ထုတ်ယူနိုင်ပါမည်။ သို့သော် ၆၂ နှစ်တွင် ထုတ်မည့်အစား အသက် ၆၃ နှစ်ကျမှ စထုတ်မည်ဆိုပါက ထိုစုငွေကို အသက် ၈၄ နှစ်ထိ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ စကာ CPF စုစုပေါင်း အနည်းဆုံးစုငွေ (CPF Minimum Sum) ကို ယခင်က ၁၀၆၀၀၀ မျှသာ သတ်မှတ်ထားရာမှ အနည်းဆုံး စင်းဒေါ်လာ ၁၁၇၀၀၀ ရှိရမည်ဟု ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည်။ ထိုငွေပမာဏကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၁၂၀၀၀၀ ရောက်သည်ထိ နှစ်စဉ် တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်၏။ နှစ်စဉ်ငွေဖောင်းပွမှုပေါ်မူတည်၍လည်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
CPF Minimum Sum ကို ပြည့်မီအောင် ဖြည့်ရမည်သာမက Medisave Account မှ ငွေကိုလည်း ငွေပြန်ထုတ်မည့် အချိန်မတိုင်မီ သတ်မှတ်ထားသည့် ပမာဏပြည့်အောင် ဖြည့်ရပါမည်။ အကယ်၍ နည်းနေလျှင် Oridinary Account မှသော်လည်းကောင်း၊ Special Account မှသော်လည်းကောင်း ပိုလာသည့်ငွေကို ပြောင်းထည့်မည်ဖြစ်၏။ ဤသည်မှာ အသက် ၅၅ နှစ်ပြည့်၍ ပထမဆုံးအကြိမ် ငွေပြန်ထုတ်သည်ဆိုသည်နှင့် အကျုံးဝင်ပါသည်။ နောင်ဆက်ထုတ်သွားမည့် ငွေများတွင်လည်း ဤအတိုင်းဖြစ်၏။
မှတ်ချက်။ ။ ယခုမှာ ယေဘူယျ ရှင်းပြချက်ဖြစ်သဖြင့် ဤအခေါ်အဝေါ်များနှင့် မရင်းနှီးသေးသူ စာဖတ်သူများ အဖို့ မျက်စိလည်စရာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေပါမည်။ နောက်ပိုင်းကျ ကျွန်တော် အသေးစိတ်ထပ်မံရှင်းပြပါမည်။
၂) ကျန်းမာရေးအတွက် သုံးခြင်း
ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်များအတွက် သုံးနိုင်စေရန် လစဉ် ထည့်ဝင်နေရသည့် Medisave Account မှ ပိုက်ဆံများက အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မည်။ ထိုငွေများကို မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ မိမိကိုမှီခိုနေသူများအတွက် သော်လည်းကောင်း သုံးနိုင်ပါမည်။ အချို့သော အပြင်လူနာကုသခြင်းများအတွက်လည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သုံးနိုင်၏။
(ကျွန်တော့်တွင် ဆီးချိုနှင့် လည်ပင်းကြီးရောဂါကဲ့သို့သော ကု၍မပျောက်နိုင်သည့် ရောဂါများရှိရာ သေသည်အထိ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းနှင့် နှစ်ပါးသွားနေရမည်ဖြစ်၏။ သို့အတွက် ၂ လ သို့မဟုတ် ၃ လ တစ်ကြိမ် အမြဲ ဆေးခန်းပြရသည်။ Jurong Poly clinic တွင်ဖြစ်၏။ ထိုအခါ တစ်ခါတစ်ရံ ဆေးဘိုး၊ ဆရာဝန်ပြခ၊ မျက်လုံးစမ်းခ၊ သွေးစစ်ခ စသဖြင့် ဆေးကုစရိတ် ၁၃၀ လောက်ကျပါသည်။ ကျွန်တော်က ဤငွေအားလုံးကို ငွေသားဖြင့်ပေးမည့်အစား ကျွန်တော့် Medisave Account ထဲမှ ပေးသည်။ သို့သော် အကုန်တော့ ပေးလို့မရ။ အကန့်အသတ်နှင့် ဖြစ်၏။
Ø Medisave ကို သုံးရန် ဆေးကုသစရိတ် အနည်းဆုံး ၅၀ ရှိရမည်။
Ø ဆေးကုသစရိတ်၏ ၇၅% လောက်ကိုသာ Medisave နှင့်ပေးလို့ရမည်။ ဒါတောင် ပုံသေမဟုတ်ပါ။ ဆေးကုစရိတ်များလာသည်နှင့် ထိုရာနှုံးကိုလည်း လျှော့ချလိုက်ပါသည်။
Ø Medisave နှင့်ပေးသည်ဆိုစေ။ ထင်တိုင်းပေးလို့မရ။ တစ်နှစ်လျှင် ၃၀၀ သာပေးခွင့်ပြုပါသည်။
Ø တစ်ခါ Medisave သုံးတိုင်းလည်း admin fee ဆိုကာ ၃ ကျပ်ခွဲလည်းပေးရသေး၏။ မှတ်ကရော့။)
မှတ်ချက်။ ။ စင်ကာပူနိုင်ငံသားများ ဆေးကုသရာတွင် အခက်အခဲမရှိစေရန် စင်ကာပူအစိုးရက 3M System ကို ချမှတ်ပေးထား၏။ Medisave, Medishield, Medifund စနစ်ဖြစ်၏။ ယခုက ကျွန်တော် CPF ကို ဦးတည်သွားနေတာ ဖြစ်သဖြင့် ဤ 3M System အကြောင်း ချန်ခဲ့ပါမည်။ နည်းနည်းလည်း ရှုပ်၏။ နောက်မှ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် သပ်သပ် ရေးပါမည်။ သို့သော် ပျင်းစရာကောင်းလှသော အကြောင်းအရာဖြစ်၏။
Medisave စုငွေများကို Mesishield အတွက် သုံးနိုင်သည်။ Medishield မှာ နာတာရှည်ရောဂါများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များလှသော အသည်းအပြင်းရောဂါများ စသည်တို့ကို ကာမိရန် စီမံပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အသက်ကြီးသူများအတွက်မူ Eldershield စနစ် ရှိ၏။ ကြာရှည်စောင့်ရှောက်ရမည့် စရိတ်စကအတွက် အစီအမံဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမည်။
၀င်ငွေနည်းသော မိသားစုများအတွက် Medifund စနစ်ထားပေးသည်။ ဤအကြောင်းများကို သီးသန့်ဆောင်းပါးရေးပါမည်။
က) Medisave စုငွေပမာဏ (Medisave Minimum Sum) ကို ၂၀၁၁ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ၃၄၅၀၀ မှ ၃၆၀၀၀ ထိ တိုးမြှင့်လိုက်၏။ မိမိစုငွေသည် ထိုပမာဏထက် ပိုများနေသည်ဆိုပါစို့။ ထိုပိုငွေကို အသက် ၅၅ နှစ်ကျော်လျှင် ပြန်ထုတ်လို့ ရသည်။
ခ) မိမိ၏ Medisave Account ထဲ၌ အများဆုံးထားနိုင်သော ငွေပမာဏကို Medisave Minimum Sum + ၅၀၀၀။ တစ်နည်းအားဖြင့် စုစုပေါင်းစုငွေ စင်းဒေါ်လာ ၄၁၀၀၀ ဟု သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ ၎င်းကို Medisave Contribution Ceiling (MCC) ဟုခေါ်၏။ ထိုပမာဏထက်ပိုသော ပိုက်ဆံအားလုံးကို Special Account အတွင်း လွှဲပြောင်းထည့်ပေးပါလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်များကာမိအောင် ဤကဲ့သို့ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
(ကျွန်တော့်တွင် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလေးတစ်ခု ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်က ဤလုပ်ငန်းမှနေ၍ လခမထုတ်သည့် အတွက် CPF ထည့်စရာမလို။ သို့သော် ပထမ ၂ နှစ်က ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအတွက် တစ်လလျှင် ၁၉ ကျပ် CPF ထဲ ပေါင်းထည့်ပါသည်။ သို့သော် ဘာစိတ်ကူးပေါက်သည်မသိ။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအတွက်ဆိုကာ မနှစ်က ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွက် Medisave Account အတွင်းသို့ ၃၈၈၀ သွင်းခိုင်းပါသည်။ ၂၀၁၀ နှစ်တွင်မူ ၄၅၀၀ ထည့်ခိုင်းပါသည်။ မနှစ်ကတော့ တစ်လုံးထဲ ထည့်ခိုင်းသည်။ ယခုနှစ်တွင် လစဉ် GIRO ဖြင့် ဖြတ်သည်။ သို့အတွက် ကျွန်တော့် Medisave Account အတွင်းမှ ငွေသုံးသောင်းလောက်မှာ ကျွန်တော့်ကို လျှာထုတ်ကာ ပြောင်လှောင်ပြနေ၏။ သည်ပိုက်ဆံများကို ဆေးရုံတက်မှသာ သုံးခွင့် ရမည်။ သည်အတိုင်းကတော့ မြင်သာမြင် မကြင်ရသော ငွေစများဖြစ်ပါ၏။ တစ်ခုကောင်းသည်မှာ တို့ခွင့်၊ ထိခွင့်မရှိသဖြင့် သည်ငွေပမာဏ တိုးလာနေသည်ကို အမြဲမပြတ်မြင်နေနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
၃) အိမ်ဝယ်ရန် သုံးခြင်း
အိမ်ဝယ်ရန် မိမိ၏ CPF Ordinary Account ၌ ရှိသမျှပိုက်ဆံ အကုန်သုံးလို့ရပါသည်။ နောက်ပြီး ဘဏ်မှချေးငွေကိုလည်း ထို account အတွင်းမှပင် ဆပ်လို့ရသည်။ ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။ ဘဏ်က CPF နှင့်ချိတ်ဆက်ကာ သူတို့ဟာသူတို့ ဖြတ်သွား လိမ့်မည်။
ဤသည်မှာ အကြမ်းဖျဉ်းသိလိုသူတို့အတွက် အချုပ်ဖြစ်၏။ ယခု အသေးစိတ် ဖော်ပြပါမည်။ အသေးစိတ်သဖြင့်လည်း အတော်ရှည်ပါလိမ့်မည်။
CPF ကို မည်သို့ထည့်ဝင်ရသနည်း
ဤကိစ္စကား အတော်ရှည်လျားထွေပြားလှသည့် ကိစ္စဖြစ်၏။ သို့သော် မလိုတာတွေဖယ်ကာ လိုသလောက် ချုံ့ရေးပြပါမည်။
၁။ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းများ
၂။ ပင်စင်မစားရသော ဥပဒေ၀န်ထမ်း နှင့် အထောက်အပံ့ခံကျောင်းဝန်ထမ်းများ
၃။ ပင်စင်မစားရသော ၀န်ကြီးဌာန၀န်ထမ်းများ - အတွက်
မှတ်စု။ ။ ထိုဝန်ထမ်းများ၏ သာမန် အမြင့်ဆုံးလစာ မှာ ၅၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ခ) PR ရပြီး ၃ နှစ်ပြည့်သူများ
ဂ) PR သက်တမ်း ၁ နှစ်၊ ၂ နှစ်မျှသာ ရှိသေးသော်လည်း အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအတွက် ထည့်ဝင်ရန်ရှိသည့် CPF ကို အပြည့်အ၀ထည့်ဝင်ရန် လျှောက်ထားပြီးသူ - များအတွက်
၀န်ထမ်း၏ အသက် (နှစ်)
ထည့်ဝင်ရန်နှုံး (လခ ၁၅၀၀ အထက်)
၃၅ နှစ်နှင့် အောက်
၃၅ မှ ၄၅
၄၅ မှ ၅၀
၅၀ မှ ၅၅
၅၅ မှ ၆၀
၆၀ မှ ၆၅
SA = Special Account
MA = Medisave Account
ရှင်းလင်းချက်။ ။ အသင်သည် အသက် ၄၀ ရှိပြီး လခ ၂၀၀၀ ရသည်ဆိုပါစို့။
အသက် ၄၀ ဖြစ်သဖြင့် ဇယားမှ (၃၅ မှ ၄၅) အတန်းတွင်ကြည့်ပါ။ အလုပ်ရှင်ထည့်ဝင်နှုံး ၁၆၊ ၀န်ထမ်း ထည့်ဝင်နှုံး ၂၀ ဆိုတာ တွေ့ပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် သင်၏ CPF Account အတွင်းသို့ သင့်အလုပ်ရှင်က ထည့်ပေးမည်မှာ ၂၀၀၀ ၏ ၁၆% = ၃၂၀
သင့်လခထဲမှ ထည့်ဝင်ရမည်မှာ ၂၀၀၀ ၏ ၂၀% = ၄၀၀
ထို့ကြောင့် စုစုပေါင်း ထည့်ဝင်ငွေ = ၃၂၀ + ၄၀၀ = ၇၂၀ ဖြစ်၏။ ( တစ်နည်းအားဖြင့် ၂၀၀၀ ၏ ၃၆%)
သို့ဖြစ်သောကြောင့် လခ ၂၀၀၀ ရသည်ဟုဆိုသော်လည်း တကယ်လခထုတ်လျှင် ငွေသားဖြင့်သင်ရမည့်ပိုက်ဆံမှာ ၂၀၀၀ - ၄၀၀ = ၁၆၀၀ သာဖြစ်ပါ၏။ (မိန်းမကိုလည်း နားလည်အောင်ရှင်းပြထားအုံးဗျ။ မဟုတ်ရင် တော်ပြောတော့ ၂၀၀၀ ရတယ်ဆို။ ခု ဘယ့်နှာကြောင့် ၁၆၀၀ ပဲပေးသတုံး။ ကျန်တဲ့ ၄၀၀ ကို ဘယ်ဖဦးထုပ်မ သွားထောက်ပံ့နေသလဲ လို့ ရန်ထောင်ခံ ထိနေအုံးမယ်။)
ထို ထည့်ဝင်ငွေ ၇၂၀ ကို CPF Account သုံးခုအတွင်း အောက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းပေးပါသည်။
အထက်ပါဇယား (၃၅ မှ ၄၅) အတန်းတွင် CPF Account များ ခွဲဝေပုံကို (OA - ၂၁ , SA - ၇, MA - ၈) ဟု ပြထား၏။
ဤတွင်ဖော်ပြထားသော CPF Account များအတွင်းသို့ ခွဲထည့်သော ရာခိုင်နှုံး (OA - ၂၁ , SA - ၇, MA - ၈) မှာလည်း လခ၏ ရာခိုင်နှုံးများဖြစ်၏။ ( ၂၁+၇+၈ = ၃၆)
ထို့ကြောင့် OA = Ordinary Account အတွင်းသို့ ၂၀၀၀ ၏ ၂၁% = ၄၂၀ ထည့်ပေးမည်။
SA = Special Account အတွင်းသို့ ၂၀၀၀ ၏ ၇% = ၁၄၀ ထည့်ပေးမည်။
MA = Medisave Account အတွင်းသို့ ၂၀၀၀ ၏ ၈% = ၁၆၀ ထည့်ပေးမည်။
ထို့ကြောင့် ၄၂၀+၁၄၀+၁၆၀ = ၇၂၀ ဖြစ်၏။
လခ ၁၅၀၀ အောက်ရသူများအတွက် ဇယားသီးသန့်ရှိပါသည်။ (ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေအကုန်လုံး လခ ၁၅၀၀ အထက်ရကြ သူတွေချည်းပဲလို့ အောက်မေ့ပြီး ၁၅၀၀ အောက်ဇယားကို ချန်ခဲ့မယ်နော။ သိချင်တဲ့သူတွေ http://mycpf.cpf.gov.sg/NR/rdonlyres/B2F1F51A-1894-4A52-8259-F8914EB6934C/0/SingaporeCitizen3rdyearSPR_PTENPENSep2011.pdf မှာကြည့်ပါ။)
PR သက်တမ်း ၁ နှစ်သာ ရှိသေးသူ အသက် ၃၅ နှစ်နှင့်အောက် ၀န်ထမ်းများအတွက်
လခ ၁၂၀၀ မှ ၁၅၀၀
TW ၏ ၄%+$ 30+ 0.06 (TW - $750)
$30+ 0.6 (TW-$750)
လခ ၁၅၀၀ အထက်
Upto Maximum of $450
5% (OW)]* + 5% (AW)
* Up toamaximum of $250
PR သက်တမ်း ၁ နှစ်သာ ရှိသေးသူ အသက် ၃၅ မှ ၅၀ နှစ် အတွင်း ၀န်ထမ်းများအတွက်
$42.96 + 0.0568 (TW - $1,200) +
$30 + 0.06 (TW - $750)
[9% (OW)]* + 9% (AW)
* Up toamaximum of $450
PR သက်တမ်း ၁ နှစ်သာ ရှိသေးသူ အသက် ၅၀ မှ ၅၅ နှစ်အတွင်း ၀န်ထမ်းများအတွက်
$41.04 + 0.0632 (TW - $1,200) +
PR သက်တမ်း ၁ နှစ်သာ ရှိသေးသူ အသက် အသက် ၅၅ မှ ၆၀ နှစ်အတွင်း ၀န်ထမ်းများအတွက်
$38.40 + 0.072 (TW - $1,200) +
PR သက်တမ်း ၁ နှစ်သာ ရှိသေးသူ အသက် အသက် ၆၀ မှ ၆၅ နှစ်အတွင်း ၀န်ထမ်းများအတွက်
$29.40 + 0.077 (TW - $1,200) +
[8.5% (OW)]* + 8.5% (AW)
* Up toamaximum of $425
PR သက်တမ်း ၁ နှစ်သာ ရှိသေးသူ အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက် ၀န်ထမ်းများအတွက်
PR သက်တမ်း ၂ နှစ် ရှိသူ အသက် ၃၅ နှစ်နှင့်အောက် ၀န်ထမ်းများအတွက်
9% (TW) +
$90 + 0.18 (TW - $750)
[24% (OW)]* + 24% (AW)
* Up toamaximum of $1,200
[15% (OW)]* + 15% (AW)
* Up toamaximum of $750
PR သက်တမ်း ၂ နှစ် ရှိသူ အသက် ၃၅ မှ ၅၀ နှစ် အတွင်း ၀န်ထမ်းများအတွက်
$96.72 + 0.1276 (TW - $1,200) +
PR သက်တမ်း ၂ နှစ် ရှိသူ အသက် ၅၀ မှ ၅၅ နှစ် အတွင်း ၀န်ထမ်းများအတွက်
$92.52 + 0.1416 (TW - $1,200) +
PR သက်တမ်း ၂ နှစ် ရှိသူ အသက် ၅၅ မှ ၆၀ နှစ် အတွင်း ၀န်ထမ်းများအတွက်
$57.60 + 0.108 (TW - $1,200) +
$75 + 0.15 (TW - $750)
* Up toamaximum of $925
* Up toamaximum of $625
PR သက်တမ်း ၂ နှစ် ရှိသူ အသက် ၆၀ မှ ၆၅ နှစ် အတွင်း ၀န်ထမ်းများအတွက်
$45 + 0.09 (TW - $750)
[11% (OW)]* + 11% (AW)
* Up toamaximum of $550
* Up toamaximum of $375
PR သက်တမ်း ၂ နှစ် ရှိသူ အသက် ၆၅ နှစ် အထက် ၀န်ထမ်းများအတွက်
OW: Ordinary Wages. CPF is computed up to OW Ceiling of $5,000. (သာမန်လစာ)
AW: Additional Wages (အပိုကြေး)
TW: Total Wages (Ordinary Wages + Additional Wages) (စုစုပေါင်း လစာ)
ဤမျှလောက်ဆိုလျှင် CPF အဘယ်မျှ ရှုပ်ကြောင်း မိတ်ဆွေတို့ သတိပြုမိလောက်ပါပြီ။ ဤသည်မှာ အပြည့်အစုံမဟုတ်သေး။ ရှုပ်ထွေးလှသော ဇယားကြီးမှ သိသင့်သလောက် ထုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါသည်။
အပိုင်း(ခ) ကား ပင်စင်စားရသူတို့အတွက်ဖြစ်သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မဆိုင်ဟု သဘောထားကာ ချန်ခဲ့ပါမည်။ သိလိုသူများ
အတိုးနှုံး (Interest) (၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ထိ) (တစ်နှစ်လျှင် ၄ ကြိမ် review လုပ်ပါမည်။)
သာမန် Ordinary Account အတွက် - 2.5%
အထူး Special Account အတွက် - 4%
ဆေး Medisave Account အတွက် - 4%
အကယ်၍ မိမိ CPF စုငွေအားလုံးသည် ၆ သောင်းနှင့်အထက်ဆိုလျှင် နောက်ထပ် ၁% ပိုပေးမည်။ သို့သော် OA ၌ အနည်းဆုံး ၂ သောင်းရှိနေရမည်။
သို့အတွက် အသုံးမလိုလျှင် အတိုးများများရရန် OA မှ SA သို့ပြောင်းထည့်ပါဆို၏။ သို့သော် သူက တစ်လမ်းသွားဖြစ်သည်။ SA ထဲရောက်သွားသော ပိုက်ဆံကို OA ထဲ ပြန်ပြောင်းလို့မရတော့ပါလေ။ ထို့ကြောင့် OA ထဲတွင် မလိုတော့တာ သေချာမှ SA ထဲပြောင်းသင့်ပါသည်။
CPF Minimum Sum Scheme (MSS) (CPF အနည်းဆုံး စုငွေပေါင်း အစီအစဉ်)
CPF Minimum Sum ဆိုသည်မှာ သင် အသက် ၅၅ နှစ်ပြည့်လျှင် သင့် CPF စုငွေထဲ၌ ရှိနေရမည့် အနည်းဆုံး စုဆောင်းငွေ ပမာဏ ဖြစ်သည်။ ဤငွေမှာ သင်အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့သည့် ကာလမှစကာ သေဆုံးသည့်အချိန်ထိ ငွေရေးကြေးရေး အခက် အခဲမရှိလေအောင် စုပေးထားသည့် ပိုက်ဆံဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော စုဆောင်းငွေ သင့် account ထဲ၌ရှိနေပြီဆိုလျှင် အတိုးနှုံးကို တစ်နှစ်လျှင် ၄% ပေးသည်။ အသက် ၅၅ နှစ်ပြည့်၍ သတ်မှတ်ထားသော စုငွေပြည့်ပြီဆိုလျှင် CPF တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို စတင် ထုတ်ယူ၍ရပါပြီ။ မည်မျှထုတ်ယူနိုင်သနည်း ဆိုသည်မှာ စုငွေမည်မျှရှိပြီနည်း ဆိုသည့်အပေါ် မူတည်ပါသည်။
ဤစုငွေကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ၈ သောင်း သတ်မှတ်သည်။ ထိုငွေပမာဏကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၁၂၀,၀၀၀ ရောက်သည်ထိ နှစ်စဉ်တိုးမြှင့်သွားမည်။ CPF ပိုက်ဆံနှင့် အိမ်ဝယ်ထားသူတို့အဖို့ အသက် ၅၅ နှစ်ရောက်သည့်တိုင် ထို CPF Minimum Sum ကို ပြည့်မီအောင် မထည့်နိုင်ဆိုပါစို့။ အသင့်အိမ်တန်ဘိုး၏ ထက်ဝက်ကို ထို CPF Minimum Sum အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပါလိမ့်မည်။ အောက်တွင် တွက်နည်းဥပမာကို ပြထားပါသည်။
HDB’s average valuation price (သင့်အိမ်တန်ဘိုး)
Less outstanding HDB loan (အိမ်ဘိုးပေးရန်ကြွေးကျန်)
Residual value : (ကျန်သောငွေပမာဏ)
Co-owner's CPF usage : (စပ်တူဝယ်သူအတွက်)
Member's share : (CPF တွင် သင်ပြနိုင်သောပမာဏ)
အထက်ပါဇယားတွင် အိမ်တန်ဘိုး သုံးသိန်း (Valuation Price) ဖြစ်၏။ အိမ်ကို အသင်နှင့် အသင့်အိမ်ထောင်ဘက် ထက်ဝက်စီပိုင်ကြသည်။ အိမ်တန်ဘိုးပြန်ဆပ်ရန် တစ်သိန်းခွဲကြွေးကျန်သေးသည်။ အကယ်၍ သင့် Minimum Sum သည် $131,000 ဖြစ်ပါက ထိုအိမ်အတွက် သင် $75,000 (သို့သော် အများဆုံး $65,500) သာ ပြနိုင်မည်ဖြစ်၏။
Where the co-owner did not use CPF for the property and has 50% share ownership
CPF မှ လစဉ်ထောက်ပံ့ငွေကို အသက် ၆၂ နှစ်တွင် စတင်ပေးပါမည်။ နောက်ဆုံး သင့် CPF စုငွေအားလုံးကုန်သွားသည်ထိ ပေးပါမည်။ ထို့ကြောင့် CPF ပိုက်ဆံ ကြာကြာသုံးနိုင်ရန် ပြန်ထုတ်သောနှစ်ကို နောက်ကျနိုင်သမျှ နောက်ကျပါစေဟု အကြံပြု ထားပါသည်။
အသင်၏ CPF Minimum Sum သည် သတ်မှတ်ထားသည်ထက် ပိုနေပါက သင့်ဇနီး၊ မိခင်၊ ဖခင်၊ အဖိုး၊ အဖွား၊ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမ တို့၏ CPF အတွင်းပြောင်း ထည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် သင့် OA account မှ ပိုက်ဆံကိုသာ ပြောင်းထည့်ပေးလို့ ရပါသည်။
အသင်၏ အိမ်ထောင်ဖက်သည် မသန်မစွမ်း သို့မဟုတ် လခ ၄၀၀၀ ထက်မကျော်ပါက အသင့်ပိုက်ဆံကို သူ့ CPF အား top up လုပ်ရန် သုံးနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ဤကဲ့သို့ သုံးခဲ့သည်ဆိုပါက တစ်နှစ်လျှင် စင်းဒေါ်လာ ၇၀၀၀ ထိ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုပါသည်။
နှစ်စဉ်တိုးမြင့်လာသည့် CPF Minimum Sum ကိုအောက်ပါအတိုင်း ဇယားဖြင့်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
မည်သူများသည် CPF ပိုက်ဆံများကို ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သနည်း
၁။ စင်ကာပူ PR ကို စွန့်လွှတ်လိုက်သူများ၊ စင်ကာပူမှထုတ်ပေးထားသည့် သက်တမ်းရှိ Work Permit, Employment Pass တစ်ခုခုကို ကိုင်ဆောင်မထားသူများ။
၂။ အသက် ၅၅ နှစ်အထက်ရှိသူများ။
၃။ အသက် ၅၀ နှင့် ၅၅ နှစ်ကြား။ သို့သော် CPF ပြန်ထုတ်ရန် လျှောက်လွှာမတင်မီ စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်း ၂ နှစ် အလုပ်မလုပ် ခဲ့သူများ။
၄။ ကိုယ်ခန္ဓာအရ သို့မဟုတ် စိတ်အခြေအနေအရ အလုပ်လုပ်ရန် မသင့်တော်တော့သူများ။
၅။ စင်ကာပူ နှင့် West Malaysia မှ အပြီးအပိုင်ထွက်ခွာသွားသူများ။ (၎င်းတို့သည် စင်ကာပူ၌ ပြန်လည်နေထိုင်ရန်သော် လည်းကောင်း၊ အလုပ်လာလုပ်ရန်သော်လည်းကောင်း ရည်ရွယ်ချက်မရှိသူများ ဖြစ်ရမည်)
CPF ပိုက်ဆံများကို မည်ကဲ့သို့ ပြန်လည်ထုတ်ယူရမည်နည်း
CPF ပိုက်ဆံများပြန်ထုတ်ရန် Online မှ SingPass ဖြင့် လျှောက်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ပုံစံဖြည့်ပြီးလည်း စာတိုက်မှ ပို့နိုင်သည်။ ပို့ရမည့်လိပ်စာမှာ -
Withdrawal Schemes Department
၁။ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် နေထိုင်စဉ်အတွင်းသုံးခဲ့သော ပတ်စ်ပို့
၂။ PR ကို cancel လုပ်ပြီးကြောင်း ICA မှစာ
၃။ စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီနာမည်များ (အလုပ်စ၀င်သည့်ရက်နှင့် အလုပ်မှ ထွက်လာသည့်ရက်အပါအ၀င်)
၄။ CPF nominate လုပ်ခဲ့လျှင် လုပ်ခဲ့သော နာမည်အားလုံး၊ မလုပ်ခဲ့လျှင်လည်း မလုပ်ဖူး ဆိုသည့်စာ
၅။ သင့်နာမည်သည် CPF ထည့်ဝင်နေသော နာမည်နှင့် မတူပါက လက်ထပ်စာချုပ်၊ အမည်ပြောင်းစာရွက်စာတမ်း၊ ဘဏ်စာရင်းစာရွက် စသည်တင်ပြရမည်။
၁။ အကယ်၍ သင့်တွင် စင်ကာပူ PR ကဒ်နှင့်လုပ်ထားသော POSB account ရှိပါက Bank GIRO နှင့် ပြန်ထည့်ပေးလိမ့်မည်။
၂။ အကယ်၍ သင့်နိုင်ငံ (ဥပမာ - မြန်မာနိုင်ငံ) ရှိ ဘဏ်သို့လွှဲစေလိုပါကလည်း TT (Telegraphic Transfer) ဖြင့်လွှဲနိုင်ပါ သည်။ သို့သော် ထိုဘဏ်သည် စင်ကာပူဒေါ်လာကို လက်ခံသောဘဏ်ဖြစ်ရမည်။ ထိုဘဏ်၏ လိပ်စာ၊ SWIFT code၊ စာမျက်နှာ ၂ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်တို့မှန်ကန်ကြောင်း ဘဏ်မှထောက်ခံစာ စသည်တို့ တင်ပြရပါမည်။
၃။ အကယ်၍ သင်ပေးသော အချက်အလက်များမပြည့်စုံ၍ ဘဏ်သို့မလွှဲနိုင်သည်ဖြစ်အံ့။ သင့်ပိုက်ဆံကို စင်ကာပူဒေါ်လာ ချက်လက်မှတ်ဖြင့်ပေးပါလိမ့်မည်။ ထို ချက်လက်မှတ်ကို clear လုပ်ရန် ဘဏ်မှပိုက်ဆံတောင်းပါလိမ့်မည်။ ဤစရိတ်များကို သင်ကျခံရပါလိမ့်မည်။
၄။ သင်၏ CPF ပြန်ထုတ်ခွင့် approve ဖြစ်ပါက IRAS (အခွန်ရုံး) သို့ သင်ကျန်ရှိနေသေးသော အခွန်အခများအား ရှင်းလင်း ရန်လိုပါသည်။
၅။ အကယ်၍ သင်သည် အသက် ၂၁ နှစ်အောက်ဖြစ်ပါက ပြန်အမ်းငွေကို သင့်မိဘများအား လွှဲပေးပါလိမ့်မည်။
CPF ပိုက်ဆံပြန်ထုတ်ရန် မည်မျှကြာမည်နည်း
Bank GIRO မဟုတ်ပါက
အလုပ်လုပ်ရက် ၁၅ ရက်
အလုပ်လုပ်ရက် ၁၀ ရက်
မှတ်ချက်။ ။ အလုပ်လုပ်ရက် ၁၅ ရက်တွင် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များမပါပါ။ ဥပမာ - ယခု ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလ ဆိုကြပါစို့။ နှစ်ကူး ၁၊ ၂ နှင့် တရုတ်နှစ်ကူး ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄ ရက်နေ့များမှာ ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တစ်လလုံး အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်းမှာ ၁၉ ရက်မျှသာ ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သည်တွင် ၁၅ ရက်၊ အရက် ၂၀ ဟုဖော်ပြထား သော်လည်း လက်တွေ့တွင် တစ်လခန့်ကြာပါလိမ့်မည်။
ထပ်မံသိလိုသေးသည်ဖြစ်အံ့။ closing-account@cpf.gov.sg သို့သော်လည်းကောင်း၊ ဖုံးနံပါတ် - 1800-227-1188 သို့သော် လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Draw-Down Age ဟူသည် သင် CPF စုငွေထဲမှ လစဉ်ပြန်လည်ခံစားရမည့် အသက်ဖြစ်၏။ အသက် ၆၂ နှစ်ပြည့်လျှင် စတင်ခံစားရမည် စသည်။
၁၉၉၉ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မတိုင်မီ အသက် ၅၅ နှစ် ပြည့်သူများ၏ Draw-Down Age မှာ ၆၀ ဖြစ်ပါသည်။
၂၃-၁-၂၀၁၂ ည ၁၁ နာရီ ၅ မိနစ်
Posted by အေးငြိမ်း at 11:09 PM
ဦးဇော်အောင် ပို့လိုက်သော ဖြည့်စွက်ချက်ကို စာဖတ်သူများအတွက် ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်ပါ၏။
အာဏာရယူခြင်း (သို့မဟုတ်) အာဏာပိုင်နှင့်ပေါင်းဖေါ်အမျိုးစပ်ခြင်းသည် အမြန်ဆုံးသောသူဌေးဖြစ်နည်း ဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းအာဏာမက်ကြပါသည်။ နိုင်ငံတော်အာဏာအတွက်လည်း တိုက်ခိုက်နေရပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်မှကြံဖွတ်အစိုးရနှင့် စင်ကာပူမှ ပီအေပီအစိုးရများသည် အာဏာမလွတ်ရအောင် နည်းမျိုးစုံဖြင့်လုပ်နေကြပါသည်။
လူကောင်းများသော အစိုးရသည် ပြည်သူ့ထံမှငွေကို မလိမ့်တပတ်ဖြင့်စုဆောင်းစေပြီး တိုင်းပြည်လိုအပ်သော ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေးများတွင် သုံးစွဲစေပါသည်။ စုဆောင်းငွေများတွင် စင်ကာပူ၏ စီပီအက်ဖ် သည် ခေတ်သစ်အစ္စရေးနည်းလမ်းကို အမှီပြုထားသောကြောင့် အမေရိကန်၏ ဆိုရှယ်စစ်ကျူရတီနည်းလမ်းထက် များစွာအဆင့်မြင့်ပါသည်။ အမေရိကန်တွင် ဆိုရှယ်စစ်ကျူရတီ စုဆောင်းငွေများကို လွတ်ပ်ဟိုး Loop Hole များမှ Lawer & Doctor များက ထုတ်ယူသုံးစွဲနေကြပြီး တိုင်းပြည်အစိုးရ တဖြေးဖြေးဆင်းရဲလာသည်။ စင်ကာပူ၊တရုပ်နိုင်ငံများက အမေရိကန်နှင့်ဥရောပနိုင်ငံများ၏ ဆိုရှယ်စစ်ကျူရတီစနစ်အားနည်းချက်များကို ပိတ်ဆို့လုပ်ကိုင်သောကြောင့် တဖြေးဖြေးချမ်းသာလာကြသည်မှာ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပင်ဖြစ်ပါသည်။
စင်ကာပူသည် နှစ်၄၀အတွင်း တစ်ဦးခြင်းဝင်ငွေ per capital income တွင် ကမ္ဘာ့နံပါတ်၂သို့တက်လှမ်းလာခြင်းမှာ ကျွန်တော့အတွက် အထူး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပေသည်။ ကျွန်တော်ရေးသော စင်ကာပူဆောက်လုပ်ရေးနှင့်မြန်မာများ ဆောင်းပါးတွင် စကာပူနှင့်နော်ဝေးနိုင်ငံပေါင်းပြီး REC ဆိုသော ဆိုလာပင်နယ်စက်ရုံအတွက် ဒေါ်လာ ၆.၃ဘီလျှံ ငွေစုဆောင်းပြီး၊ နော်ဝေးနှင့်ဥရောပပြည်သူများထံမှ ငွေလိမ်ယူခြင်းမှာ သူဌေးအကြီးဆုံး (အစိုးရများ) ၏ Big Cheating ပင်ဖြစ်သည်။
အစိုးရငွေရှာနည်းတခု Government Level Making Money
ပါနီထဲကရေ - ပါနီထဲပြန်ရောက် ဆိုစကားအတိုင်း ကျွန်တော် ၁၃နှစ်လုပ်ခဲ့သော စင်ကာပူအစိုးရဆီမီးကွန်ဒက်တာ ကုမ္မဏီလည်း အစိုးရကအရှုံးခံပြီး လုပ်ပါသည်။ ရလဒ်ကတော့ ကမ္ဘာ့ဆီမီးကွန်ဒက်တာကုမ္မဏီများစွာ စင်ကာပူတွင် လာရောက်လုပ်ကိုင်သောကြောင့် စက်ရုံအတွက်အထူးလိုအပ်သော 3M Man (ကျွမ်းကျင်လုပ်သား), Material (ကုန်ကြမ်း), Method (စက်အပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္မဏီများ) စင်ကာပူတွင်လာရောက်အခြေချကြပါတော့သည်။ လက်ရှိမြန်မာပြည်ကဲ့သို့ ရေတိုစီးပွားရေးမဟုတ် ..ရေရှည် ၁၀နှစ်ကျော်မှ အသီးအပွင့်ခံစားရသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ၁၀နှစ်ကျော် အစိုးရက အရှုံးခံပြီး CPF စုဆောင်းငွေများမှ ဘီလျှံနှင့်ချီပြီး ထိုကုမ္မဏီသို့ ရင်းနှီးငွေ ထုတ်ချေးပါသည်။ ယခုအခါ စင်ကာပူတွင် ဆီမီးကွန်ဒက်တာ 3M လိုအပ်ချက်ပြည့်သွားပြီဖြစ်သောကြောင့် ထိုကုမ္မဏီ Chartered Semiconductor Manufacturing ကို အာရပ် (ဒူဘိုင်း) သူဌေးများအား ရောင်းချလိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ ကုမ္မဏီနာမည်အသစ်ဖြစ်သည် Global Foundries. ထိုကုမ္မဏီသည် အမေရိကန်ပြည်သူများနှင့်စင်ကာပူပြည်သူများ၏ ပိုလျှံစုဆောင်းငွေ (CPF saving သာမက၊ ပါစင်နယ် Bank Saving ) ကို ရအောင် IPO စတော့အိတ်ချိန်း ရှယ်ရာနည်းလမ်းဖြင့် ငွေရှာဖွေသွားပါသည်။
သူများထံမှငွေကို မည်သို့၊ရအောင်ယူရမည်ကို အမြဲကြံနေသောကြောင့် လူကိုမြင်လျှင် ပိုက်ဆံများဟု သဘောထားပြီး ဆက်ဆံရေးအလွန်ကောင်းသူများဖြစ်သည်။ ဂါးဗားမင့်ဟုခေါ်သော အစိုးရခေါင်းဆောင်ကောင်းများသည် သူဌေးအကြိးစားများဖြစ်သည်။ ပြည်သူများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှာ အခွန်ရအောင်ကောက်ပြီး၊ ထိုငွေဖြင့် တိုင်းပြည်လိုအပ်ချက်များကို လုပ်သည်။ သူတို့အိပ်ကပ်များထဲသို့လည်း ထည့်သည်။ (Corruption). ထို့ကြောင့် ဥစ္စာရှာသည့်နည်းလမ်းတွင် စီးပွားသမားများက ဘဏ်များမှငွေချေးပြီး စီးပွားလုပ်ကြသည်။ ပြည်သူများက (ရရစားစားများ) ရှိတာလေးတွေ ဘဏ်ထဲစုဆောင်းကြသည်။ ထို၂မျိုး (ပြည်သူလူထုနှင့်စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်များ) ထံမှ ဂါးဗားမင့်ဆိုသူက ထပ်မံအခွန်ကောက်တော့သည်။
အခွန်ကောက်တတ်သောအစိုးရ (ယခင်အမေရိကန်အစိုးရ နှင့် ယခုတရုပ်ပြည်၊ယခုစင်ကာပူအစိုးရ) တို့ကြောင့် အမေရိကန်နှင့်စင်ကာပူနိုင်ငံများ ကြွယ်ဝချမ်းသာလာကြသည်။ အခွန်မကောက်တတ်သောအစိုးရများ (လပ်စားမှုများသည့်နိုင်ငံ - ဥပမာ မြန်မာပြည် နှင့် အခွန်ရှောင်မှုများသည့်နိုင်ငံ - ဥပမာ ဂရိ၊ ဗြိတန် နှင့်အနောက်နိုင်ငံများစွာ) တို့မှာ တဖြေးဖြေး ဆင်းရဲလာကြသည်။
American JournalisThomas Friedman (born July 20, 1953 ရဲ့ စာအုပ်များမှာ ကျော်ကြားလှပါသည်။ ပူလစ်ဇာဆုများစွာရသော မီလျှံနာ ဂျာနယ်လစ်စ်ဖြစ်သည်။ ကျော်ဝင်းဘာသာပြန်တဲ့ World is Flat စာအုပ်နှင့်၊ မောင်စူးစမ်းဘာသာပြန်သော The Lexus and the Olive Tree: စာအုပ်များသည် မြန်မာပြည် ဂျာနယ်လစ်များနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလောကမှာကျော်ကြားလှပါသည်။
Ifaperson buys S$100 worth of gold in 1970, that amount of gold would be worth around S$1900 in 2011. In comparison, the same amount of money would be S$740 today if it is assumed that CPF pays 5% interest every year.
ဥပမာ မြန်မာပြည်တွင် တနှစ်၁၃ရာနှုန်းဘဏ်တိုးနှုန်းဖြင့် ငွေတရာကို ၁၀နှစ်စုဆောင်းပါက အတိုး၊အရင်းပေါင်း ၃၃၀ကျပ်ရရှိမည် ..ဟု မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(အစိုးရ)က ကြေညာထားပါသည်။
ထိုနည်းဖြင့် လူများ (သူဌေးနှင့်စီးပွားရေးသမားမပါ) ၏ စုဆောင်းငွေကို ဘဏ်များကရရှိပါသည်။ ထိုစုဆောင်းငွေများကို ဘဏ်များက အိမ်ပေါင်၊ မြေပေါင်းခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်သူများကို အတိုးနှုန်း ၁၅-၁၈ရာနှုန်းဖြင့် လပိုင်း (သို့မဟုတ်) လပိုင်း အတိုးပြန်ချေးပေးပါသည်။ Business Loan or Housing Loan. အိမ်ဝယ်သူများကိုချေးပေးခြင်းမှာ မိမိအိမ်ကိုပြန်လည်ပေါင်းနှံခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူလည်များက မိမိအိမ်၊မြေ၊ခြံကို ဘဏ် ၂ခု၊ ၃ခု ထံ တပြိုင်တည်းပေါင်နှံခြင်းမရှိရန် ဘဏ်များအဆက်အသွယ်ရှိထားရပါသည်။ (သက်သေခံလက်မှတ် - အိမ်ဂရမ်ကို ဘဏ်ထံအပေါင်ထားရပါသည်။)
နောက်တနည်း -လူများထံမှ ပိုက်ဆံကို ဥပဒေဘောင်ဖြင့် ရယူသောလုပ်ငန်းမှာ အသက်အာမခံဖြစ်သည်။ လူများကို အာမခံထားစေခြင်းဖြင့် ငွေစုဆောင်းစေပါသည်။ ကျွန်တော်သည် အမေရိကာမှ အသက်အာမခံကုမ္မဏီတခုအတွက် တနှစ်အေးဂျင့်အငှားလုပ်ပေးခဲ့ဖူးသောကြောင့် ..အောင်မြင်သော အသက်အာမခံအေးဂျင့်သည် အလွန်အမြက်အစွန်းရရှိကြောင်း၊ လူများ၏ အာမခံစုဆောင်းငွေများကို ဘဏ်တိုးနှုန်း (Fix Deposit) ထက် အများကြီးပိုမိုပေးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အသက်အာမခံအတွက် စုဆောင်ကာလမှာ ၅နှစ်၊ ၁၀နှစ်၊ တသက်လုံးဖြစ်သောကြောင့် အသက်အာမခံကုမ္မဏီများမှာ အလွန်ချမ်းသာကြပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းကိုလည်း အများအားဖြင့် အစိုးရကုမ္မဏီ (ဥပမာ - စင်ကာပူ NTUC Income) ကသာ လက်ဝါးအုပ်ထားပါသည်။
ကိုအေးငြိမ်း ကိုးကားသော ၀ိကိပိဒိယတွင် အစိုးရများ ပြည်သူ့ငွေကို စုဆောင်းစေသောစနစ်အချို့ရေးထားပါသည်။ ကျွန်တော်စိတ်အ၀င်စားဆုံးမှာ အစ္စရေးအစိုးရက မည်သည့်နည်းဖြင့် သူ့နိုင်ငံသားများထံမှ ငွေကိုရအောင်ယူသနည်း ..ဆိုသည်ပင်ဖြစ်သည်။ (ဂျူး ..ဆိုသောသူသည် ငွေစုဆောင်းသည့်နေရာနှင့်စီးပွားရှာသည့်နေရာတွင် ကုလား၊တရုပ်များထက် များစွာသာလွန်ပါသည်။ ထိုဂျူးသဌေးများ ..အမေရိကန်နှင့်ဥရောပမှ ထွက်ခွာပြီး ရေကြည်ရာမြက်နုရာ စင်ကာပူ၊ဟောင်ကောင်၊တရုပ်ပြည်များသို့ ထွက်ခွာနေကြပြီဖြစ်သည်။